Ahoana ny fanadiovana ny sofinao soa aman-tsara | Bezzia
Tony Torres | | Torohevitra momba ny fahasalamana
Tena ilaina ny mianatra manadio ny sofinao, satria mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny rafi-pandrenesana ny tsy fanaovana izany. Betsaka ny olona tsy miraharaha ny fahadiovan’ny sofina, ary ny ankamaroany dia manao izany amin'ny fomba diso. Mampiasa fitaovana izay mety hiteraka fahasimbana lehibe sy manimba ny fahasalaman'ny sofinao.
Ilaina ny fanadiovana ny sofina, dingana iray hafa amin'ny fahadiovana isan'andro izay tsy azo odian-tsy hita. Satria mampidi-doza toy izany koa ny manadio sofina ratsy, toy ny tsy manao izany mihitsy. Noho izany dia mitondra anao ireto torohevitra ireto izahay mba fantaro ny fomba hanatsaranao ny fahasalaman'ny sofinao.
1 Inona no fomba tsara indrindra hanadiovana ny sofina
1.1 Miaraka amin'ny rano amin'ny douche
1.2 Ahoana ny fikarakarana ny fahasalaman'ny sofinao
Inona no fomba tsara indrindra hanadiovana ny sofina
Betsaka, raha tsy ny ankamaroany, no diso hevitra momba ny atao hoe manadio ny sofiny. Ny inoana dia tsy maintsy manadio sy manala ny savoka, fa ny tena zava-misy dia ny fanesorana ny loto, fa tsy fahavalo ny savoka. Mifanohitra amin'izany, ny tavon-tsofina dia vokarina ho azy ary ny olona tsirairay dia mamokatra araka izay ilain'ny lakan-tsofina.
Ny earwax dia rafitra fanadiovana mandeha ho azy avy amin'ny vatana ary mamoaka izay tsy ilainy isan'andro. Ity savoka voajanahary ity dia tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny zavatra ivelany tsy hiditra ao amin'ny sofina. Ankoatra izany, dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny haavon'ny pH tsara indrindra. Noho izany, voajanahary tanteraka ny fananana savoka sofina ary tsy mariky ny loto izany. Rehefa manadio ny sofina, ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny manadio ny tafahoatra sy ny ivelan'ny sofina. Mariho ny fomba ahafahanao manao izany tsara sy azo antoka.
Miaraka amin'ny rano amin'ny douche
Ny hafanan'ny rano sy ny etona miforona ao amin'ny efitra fandroana mandritra ny fandroana, dia mamorona fitaovana tonga lafatra hanadiovana ny sofinao soa aman-tsara. Mila mitongilana kely fotsiny ny lohanao ary avelao ny rano mafana hidina ao anaty sofina mandritra ny roa minitra. Avy eo, apetraho amin'ny toerana mitsangana ny loha, mba hivoahan'ny rano ary hitondra ny savoka tafahoatra miaraka aminy, izay halefa amin'ny rano mafana.
Rehefa vita dia ampiasao baolina landihazo mba hanesorana ny fanamby amin'ny serizy ary manararaotra manadio ny ivelan'ny sofina ihany koa. Na izany na tsy izany, aza ampidirina swab amin'ny sofina, satria ny savoka ihany no azonao ampidirina lalina kokoa ao anaty lakan-tsofina, miteraka tamponade sy aretina lehibe. Tsy tokony hampiasa zavatra maranitra koa ianao, izay mety hanimba anao sy hiteraka olana lehibe.
Ny fanadiovana ny sofina dia tokony hifandimby, satria araka ny voalazan'ny manam-pahaizana dia tsy mety ny manao izany isan'andro. Ankoatra ny rano mafana ao amin'ny douche, azonao atao ny mampiasa vokatra hafa ho an'ity tanjona ity, toy ny rano an-dranomasina. Izy io dia vokatra voajanahary izay mampiditra ny rano an-dranomasina ao amin'ny lakan-tsofina, manalefaka ny savoka ary manampy ny fandroahana azy ho azy fa tsy manimba ny sofina. Ity no fomba mahomby indrindra hanadiovana ny sofina, ary tokony hampiasainao foana ho an'ny zazakely sy ny ankizy madinika.
Ahoana ny fikarakarana ny fahasalaman'ny sofinao
Ankoatra ny fanadiovana tsara ny sofina dia zava-dehibe tokoa ny fikarakarana ny fahasalamana amin’ny alalan’ny fahazarana tsara. Ny fampiasana écouteur, ohatra, dia tena manimba raha atao tafahoatra. Satria aseho izany ny fampiasana fitaovana ivelany sy fiarovan-doha dia mety hiteraka aretina ary ny tsy fandrenesana. Toy izany koa, ny feo mafy be, ny fihainoana mozika be loatra ary indrindra amin'ny tontolo kely, toy ny fiara, dia mampitombo ny mety ho very. fihainoana.
Tandremo ny fahasalaman'ny sofina amin'ireto toro-hevitra ireto, tsotra sy mora ampifanarahana amin'ny fanao ara-pahasalamana. Tombontsoa tsy azon'ny olona maro atao ny mandre, ary mihena rehefa mandroso ny fiainana. Aza very ny sofinao ary noho izany, afaka mankafy ny feo rehetra ianao izay miaraka amintsika isan’andro mandritra ny fiainantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Torohevitra momba ny fahasalamana » Ahoana ny fanadiovana ny sofinao
Zipo sy kiraro avo, fitambarana tonga lafatra amin'ny ririnina